Is Dr.Abiyyi Ahmed Ilma Immiyyee Miniliki or Ilma Abbaa Gadaa? – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsIs Dr.Abiyyi Ahmed Ilma Immiyyee Miniliki or Ilma Abbaa Gadaa?
Abiyyi Ahmed Ilma Immiyyee Miniliki malee Ilma Abbaa Gadaa miti.
Oromoon maaliif waan salphaa kana hubachuu dadhabe? Gaafa tokkollee “Ani Oromoodha” jedhee hin beeku. Waa’ee mucaa isaa #Dibooraa jedhe yeroo dubbatu “karaa haadhaa Amaara karaa abbaa Jimma” jedhe ; hubadhu, #Oromoo jechuu hin barbaanne. Kaabinoota isaa yeroo muudullee bakka dhaloota isaanii hima malee saba isaanii hin himu. Kun dhaamsa guddaa fi balaa qaba. Ilaalcha Sabboonummaa balleessuu fi godinummaa babal’isuuti. Sababni isaammoo beekamaadha. Yoo Sabboonummaan dagaage , Oromoon tokko ta’a , yoo godinummaa fi gosummaan babal’ate ammoo Oromoon ni laafa. Oromoon laafe ammoo osoo hin jaallatiun Itoophiyummaatti maxxana. Abiyyi Ahmed isa kana barbaada. Mul’ata Itoophiyaa ishee durii deebisna” jedhu dhugoomsuuf Sabboonummaa Oromoo dadhabsiisuun darbees balleessuun hojii isaa isa duraa akka ta’e hubatee irratti hojjechuutti jira.
Dhimmichi Oromoo ta’uu fi dhiisuu isaayyuu miti. Osoo Oromoo hin ta’iin kan aantummaa Oromoo qaban kan Oromoof waan gaarii hojjetan hedduun jiru, Prof. Asmaroom Laggasaa fakkeenya ta’uu ni danda’a. Abiyyi Ahmed garuu aangoo maqaa Oromoon argate, aangoo lubbuu Oromoo kumaatamaan argamte qabate deebi’ee farra Oromoo fi Oromummaa irratti hojjechuun isaa nama gaddisiisa. Namichi durumaa mootummaa keessa taa’ee harka-wayyaa jalaan warra Ginboot-7 waliin hojjechaa akka turee fi odeeffannoo iccitii mootummaallee osoo hin hafiin isaaniif kennaa akka ture qondaallii G-7 #Andargachew_Tsigie ifatti waltajjiirratti dubbateera. Erga Abiyyi Ahmed Muummicha Ministeeraa ta’ees warri Gibot -7 akkuma waan ofii isaanii aangoo qabataniitti gammadanii ilichanii Finfinnee seenuu qofa miti sagantaa Paartii isaanii (G-7) Karoora Mootummaan Abiyyi Ahmed ittiin qajeelfamee biyya bulchu akka ta’utti itti kennuu fi Mootummaan Abiyyi Ahmedis isuma raawwachaa fi hojiirra oolchuuf carraaqaa akka jiru namichumti aanga’aan G-7 kun afaanii baasee dubbateera. Hojii Abiyyi Ahmed beekuuf fagoo xiinxaluu hin barbaachisu. Waan raawwatamaa jiru daawwachuun qofti ga’aadha.
Fakkeenyaaf, Imaammata barnootaa maqaa Ministeera barnootaan gadi ba’e kana Ilmaan nafxanyaa bara dargii EPRP (ኢህአፓ) taatee gara biyya ambaatti baqattee carraa argatteen baratte sanatu bobaa Abiyyi jala taa’ee qopheesse. Warri #visionEthiopia maqaa jedhuun Finfinnee fi Baahirdaaritti waajjiraa banatanii Ministeera Barnootaa waliin harka-walkeessa naqatanii hojjetaa jiru. Ajaja Abiyyi Ahmediin lafti kennameefii Waajjirri Mootummaa kennameefii hojjetaa jiru.
Ministeera Barnootaa fi Ministeera Dhaabbilee Barnoota Olaanaaf gorsa kennaa kan jjiru jara kanadha. Fakkeenya hedduu kaasuun ni danda’ama. Oromoon garuu olola dabballoonni OPDO ganamaa galgala miidiyaa harkaa qabanii fi maallaqa mootumman ramadetti fayyadamanii uummata Oromoo sobaan dholodholanii burjaajessaa jiru. “ilma Abbaa Gadaatu bulcha ; kana caalaa maal barbaaddu?” jedhanii qaanii tokko malee uummata sobanii sossobu. Namichi garuu ilmaa abbaa Gadaa ta’uu miti halgaa Oromoof yaaduyyuu hin taane. Dhugaa dubbachuuf yoo ta’e Abiyyi Ahmed hanga Mallas Zeenaawwii Dhugaa Oromoon qabullee hin beeku. Mallas Zeenaawwii, haqa Oromoo sirriitti beeka, seenaa Oromoo sirriitti beeka, Finfinnee dabalatee Oromiyaan kan Oromoo akka taatee fi Abbaan biyyaa Oromoo ta’uu sirriitti beeka.
Garuu uummata isaa Tigirayiif qabsaa’e, Tigiraayiif du’aaf ofkennee ture; Tigiraayiin waan jaallatuuf faayidaa uummata isaa kabachiisuuf Oromoo fi saba biraa yoo cunqurse . qabeenya isaanii saamee kan isaaf yoo oolche waan raajii miti. Nutu ofirraa ittisuu qaba malee namichi haqa keenya beeku kun maaliif tolinnaa isaa garaa nuu laafee nu dhiisuu dide jechuun hin danda’amu.Abiyyi Ahmed garuu dhugaa keenyayyuu hin beeku. Mirga keenya kabachiisuu dhiisii isuma arganneyyuu nu harkaa buusaa jira. Ilma Immiyyee minilik ofirraa darbachuuf haa jabaannu.
Zoonii Lixaa irraa Guyyaa har’aa akka lakkoofsa faranjiitti Hagayya 29/2019
Gootichi waraana bilisummaa oromoo WBO’N waraana Gooleesituu wayyaanee maqaa sakatta’aa wbo jedhuun bobbaatee Godina Qellem Wallaggaa bakka addaa #Garjeeda naannoo mannee ummata keessa socho’uun WBOn eessa jira eessarran darbe jettee ummata gidirsaa oolte ooraalii sadiin booda aduun dhiinaan garjeeda buluu sodaattee gara Dambiddootti utuu fiigaa jirtuu leencicha Bosonaa afaan buute, duraanis WBO’N rukutuu hin dadhabne uummata keessa waan jirtuuf callisee hordofaa ture, amma ooraaliin sadanuu gaagura kanniisa hin qabne ta’e jira.waraanni achirra jirtu hundi dhumtee.hooggansi waraana wayyaanee olaanaan tokkos keessatti tumamuun hin oolle amma kana dhageessee uummata magaalaa dambidoolloo irratti goolii kaafte jedhu jiraattonni Dambi Doolloo hundi of eeggannoon socho’aa aarii isin Irratti bahuu Maaltii.mana keessan keessaa gadi hin ba’inaa